Sidee lagu ogaan karaa haddii uu dhacay weerar hubka kiimikada? - BBC News Somali
Suuriya: Dadka dhaawacyada culus qaba oo laga daadgureynayo Douma
Macron: Caddeyn baan u hayaa in Douma loo adeegsaday hubka kiimikada
"Haddii kaadida dadka la baaro waxaa la ogaan karaa in maadada Chlorine ay jirka ku jirto, haddii dhiiga iyo timaha la baarana waxaa la ogaan karaa in maadada neerfaha wax yeesha in uu qofka jiiday" ayuu yiri Hamish.
Markii sanadkii 2013-kii suntan Sarine ee neerfaha wax yeesha lagu weeraray gobolka Quudha, baarayaasha ka socda hay'adda caalamiga ah ee OPCW waxa ay heleen caddeymo ku filan in suntaas la adeegsaday.
Angela Kane oo madax ka ahayd guddigii barigaas loo direy ayaa BBC-da ku tiri "Wixii aan helnay xiligaas waxa ay ahayd maadada Sarine oo aad cufkeeda iyo culeeskeeda u badanyahay, caadi ahaan maadadana waa mid uumi baxda, waana adagtahay in maalmo kadib la helo raadkeeda, balse 2013-kii waxaan helnay cadeymo xooggan".
Markasta opo ay baarayaasha dib uga dhacaan in ay goobta gaaraan, waa markasta oo cadeymaha la heli karo ay sii baaba'aan.